Panda Keyboard 1.11.1 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 1.11.1 လွန်ခဲ့သော2နှစ်က
Application များ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း Panda Keyboard
Panda Keyboard ၏ ဖော်ပြချက်
With beautiful themes, Panda Keyboard makes your phoneadistinctive one among others. With AI prediction, Panda keyboard makes your typing more accurate and easier. Panda keyboard’s gesture input makes your typing more fun by letting you slide fingers from letter to letter. With voice typing, Panda Keyboard can help to recognize what word you want and give you accurate word suggestions.
HTC 10, HTC One A9, HTC Desire 10 Pro</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
Panda Keyboard အတွက် စတိုးအသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Panda Keyboard အပေါ် စတိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Panda Keyboard အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
Panda Keyboard အား အချက်ပြပါ
imran786 စတိုး 129 29.02k
Panda Keyboard နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Panda Keyboard အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 1.11.1
ထုတျလုပျသူ Panda Keyboard
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ https://www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html
App Name: Panda Keyboard
Release date: 2017-04-29 06:41:02
လကျမှတျ SHA1: 8D:17:57:D4:ED:7F:03:6B:F7:AF:A8:97:F1:61:31:15:3B:E2:14:18
ထုတျလုပျသူ (CN): ????
အဖှဲ့အစညျး (O): ????
နယျမွေ (L): ???????????8???????
နိုငျငံ (C): 519000
ပွညျနယျ/မွို့တျော (ST): ?????
Panda Keyboard APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ